ဒယ်လီလိုက်ပို့နေတဲ့ စက်ဘီးလေး အခိုးခံလိုက်ရလို့ အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ အသက် (၆၀)အရွယ် အဘကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော် မိုးစက် – Shwe Likes
ဒယ်လီလိုက်ပို့နေတဲ့ စက်ဘီးလေး အခိုးခံလိုက်ရလို့ အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ အသက် (၆၀)အရွယ် အဘကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော် မိုးစက်
Shwe | April 24, 2022 | Celebrity | No Comments
ပရဟိတ အလုပ်ေ တွကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဟာသလူရွှင်တော် မိုးစက် ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးသိကြ မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူရွှင်တော် မိုးစက်ဟာ ကိုဗစ်အ ချိန်ကာ လမှစပြီး ယခုအချိန်ထိ ပရဟိတ အလုပ်တွေကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ လုပ်ဆောင်ကာ ဘဝကို တန်ဖိုးရှိစွာ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအမျိုး မျိုးကြောင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ မိသားစုတွေကို ခုနှစ်ရက် သားသမီးများရဲ့ စုပေါင်းကုသိုလ်ဖြင့် တတ်နိုင်သလော က် ကူညီထော က်ပံ့ လှူဒါန်းပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အများအကျိုး အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်ေ ပးနေတဲ့ မိုးစက်ရဲ့ အလှူလေးတွေကြောင့် အနုပညာမောင်နုမတွေအပြင် ချစ်တဲ့ပရိသတ်ေ တွကပါ တွေ့မြင်ရတိုင်း ကြည်နူးဝမ်းမြောက်နေခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာလည်း မိုးစက်က ပရိသတ်တွေ ထပ်တူကြ ည်နူးပီ တိဖြစ်စေမယ့် ကူညီထောက်ပံ့ အလှူလေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ Delivery ပို့တဲ့ အ သက် (၆၀)အရွယ် အဘရဲ့ စက်ဘီးဟာ အခိုးခံလိုက် ရတယ် ဆိုလို့ လူရွှင်တော် မိုးစက်က ဆိုင်မှာဝယ်ယူ ပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဘီးအသ စ်တစ်စီး ရရှိခဲ့လို့ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကတော့ကြ ည်နူးစရာြ ဖစ်ရပါတယ်။
ယခုလို အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို ဒီထက်မက ကူညီလှူဒါန်းပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် လူရွှင်တော်မိုးစက်ကို ဆုမွန်ကောင်းလေး တောင်းပေးခဲ့ပါဦးနော်…. ။ Credit;
ပရဟိတ အလုပ္ေ တြကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဟာသလူရႊင္ေတာ္ မိုးစက္ ကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အားလုံးသိၾက မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လူရႊင္ေတာ္ မိုးစက္ဟာ ကိုဗစ္အ ခ်ိန္ကာ လမွစၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ပရဟိတ အလုပ္ေတြကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လုပ္ေဆာင္ကာ ဘဝကို တန္ဖိုးရွိစြာ ျဖတ္သန္းေနတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ မိသားစုေတြကို ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားရဲ့ စုေပါင္းကုသိုလ္ျဖင့္ တတ္နိုင္သေလာ က္ ကူညီေထာ က္ပံ့ လႉဒါန္းေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို အမ်ားအက်ိဳး အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေဆာင္ေ ပးေနတဲ့ မိုးစက္ရဲ့ အလႉေလးေတြေၾကာင့္ အႏုပညာေမာင္ႏုမေတြအျပင္ ခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေ တြကပါ ေတြ႕ျမင္ရတိုင္း ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္ေနခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုမွာလည္း မိုးစက္က ပရိသတ္ေတြ ထပ္တူၾက ည္ႏူးပီ တိျဖစ္ေစမယ့္ ကူညီေထာက္ပံ့ အလႉေလးတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါကေတာ့ Delivery ပို႔တဲ့ အ သက္ (၆၀)အရြယ္ အဘရဲ့ စက္ဘီးဟာ အခိုးခံလိုက္ ရတယ္ ဆိုလို႔ လူရႊင္ေတာ္ မိုးစက္က ဆိုင္မွာဝယ္ယူ ၿပီး လႉဒါန္းေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္ဘီးအသ စ္တစ္စီး ရရွိခဲ့လို႔ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ ျမင္ကြင္းကေတာ့ၾက ည္ႏူးစရာျ ဖစ္ရပါတယ္။
ယခုလို အခက္ခဲျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြကို ဒီထက္မက ကူညီလႉဒါန္းၿပီး ပရဟိတအလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္နိုင္ေအာင္ လူရႊင္ေတာ္မိုးစက္ကို ဆုမြန္ေကာင္းေလး ေတာင္းေပးခဲ့ပါဦးေနာ္…. ။ Credit;
မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲ အပြင်အဆင်ဆန်းနဲ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း)
မိန်းကလေးလို ဝတ်ဆင်ပြီး ခေတ်စားနေတဲ့ သီချင်းလေး အပီဒွန့်နေတဲ့ တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
တောထဲ တစ်နေရာမှာ ရောက်ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ အချစ်တော် မင်းသားချော ဒေါင်း